Midowga Yurub wuxuu Apple ku cadaadin doonaa inuu furo farsamada NFC ee qalabkooda | Wararka IPhone
Kariim Hmeidan | 07/10/2021 19:30 | Tartanka
Apple lama yaqaan furitaanka nidaamyadiisa aad u badan. Waxaan aragnay markii iPod la bilaabay, dad badan ayaa ka cawday baahida loo qabo in la isticmaalo iTunes si loogu wareejiyo muusigga Apple "mp3" player, laakiin waxaa lagu xoojiyay bilaabista iPhone. Dad badan ayaa dalbaday macruufka oo u furan is -beddellada, Apple -na wax yar bay furaysay waxa xiisaynaya. Dukaanka App -ka ayaa ah tusaalaha cad ee ah in Apple uusan mari doonin hoop -ka, dukaanka arjiga oo ay iftiiminayaan ururada tartanka caalamiga ah. Maantana maxaa loogu talagalay Midowga Yurub wuxuu qaatay ogaysiiska Apple ee NFC. Waxay qorsheynayaan inay dacwad ku soo oogaan shirkadda si ay ugu furto cid saddexaad. Sii wad akhrinta aan ku siinayno dhammaan faahfaahinta dacwaddan suurtogalka ah.
Warkaan waxaa laga soo xigtey Reuters. Midowga Yurub oo uu madax ka yahay Margrethe Vestager ayaa baari doonta hawlgalka Apple Pay iyo gaar ahaan NFC chip ee aaladaha Apple oo hadda kaliya loo isticmaali karo Apple Pay. Runtii run ma aha maadaama ay la falgali karto jajabyada kale ee NFC laakiin akhriste ahaan, soo diraha waa run in ay la jaan qaadi karto oo keliya Apple Pay. Sida iska cad tani waxay samaysaa qof kasta oo raba inuu isticmaalo waa inuu maraa Apple, wax aan ku aragno tusaale ahaan kaararka gaadiidka. Waxay qorsheynayaan inay ururiyaan dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah inay u soo diraan Apple dacwadooda sannadka soo socda.
Dabcan, maanta waxaa jira kun siyaabood oo looga gudbi karo xaddidaadaha Apple. Haa, waa inaan isticmaalnaa Wallet Apple laakiin qasab maahan inaan ku kaydsano kaararkayaga Apple Pay. In badan baa la adeegsadaa XR code (Yaa malayn lahaa), oo waxaa jira adeegyo kale oo lacag -bixin oo noo oggolaanaya inaan ka tagno kaarka oo leh lambarka QR ee ku jira Boorsada si aan u isticmaalno markaan bixinno iyada oo aan la adeegsan Apple Pay, wax la mid ah waxaan ku aragno shahaadooyinka tallaalka COVID. Waan arki doonnaa waxa ku dhacaya dalabka Midowga Yurub iyo haddii Apple ay ku dhammaato in la siiyo ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Midowga Yurub wuxuu Apple ku cadaadin doonaa inuu furo farsamada NFC ee aaladihiisa
Apple waxay soo bandhigaysaa Khayraad Cusub oo loogu talagalay Ardayda iyo Macallimiinta Xanaanada iyo Dugsiga Hoose
WhatsApp wuxuu dhaqaajiyaa sirta kaydintaada